Doorasha kenya: oo la gu dhawaaqi doono Natiijada saxda ah Ee manta – idalenews.com
Doorasha kenya: oo la gu dhawaaqi doono Natiijada saxda ah Ee manta
Idalenews-Dhamaan shacabka kenya ayaa ah kuwa u daalan una dhag haaya manta galinka dhambe in lagu dhawaaqo Natiijadda rasmiga.Shalay galab Guddiga doorashadu waxey sugayeen ilaa iyo 170 form oo ka imaanayay 290ka deegaan doorasho ee Kenya, iyo ilaa iyo Kun form oo kale oo Iyana ka imaanayay 40, 883 goob codbiin.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka iyo xuduudaha ee Kenya, Wafula Chebukati, ayaa sheegay in dhamaan dukumintiyada ay sugayaan ay soo gaarayaan maanta, markaa ka dibna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah.
Waxaa la filayaa in wixii 12ka duhurnimo ka dambeeya lagu dhawaaqo cidda ku guuleysatay madaxweynenimada Kenya.
Natiijada horu-dhaca ah ee ay guddiga doorashadu sii daayeen ilaa iyo hadda ayaa muujineysa in Madaxweynaha Kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ka horeeyo, Hogaamiyaha Mucaaradka Ra’ila Odinga sagal buundo.
Laakiin mucaaradka ayaa natiijadaasi diidan, iyagoo ku tilmaamay mmid la musuqmaasuqay, ka dib markii la jabsaday sida ay ku doodayaan computerada guddiga doorashada Kenya.
Khamiistii shalayna Madaxa Guddiga Doorashada Chebukati waxa uu sheegay inuu jiray isku day lagu doonayay in loogu dhaco komputeradooda, markii ay codeyntu soo dhamaatay ka dib, hasa yeeshee lagu guul dareystay.
Mucaaradku waxey sheegayaan in xisaabtoodu ay muujineyso in Odinga uu Kenyatta kaga adkaaday wax ka badan 600 oo kun oo cod.
Hogamiyaha Isbaheysiga Mucaaradka ee NASA, Musalia Mudavadi, ayaa isna la hadlay wariyeyaasha Khamiistii shalay.
Waxaa dalkaasi ka dhacay rabshado goos goos ah, gaar ahaan meelo ay ka mid yihiin Kisumu, Mathare iyo abasiibada Kibera ee magaalada Nairobi, halkaas oo Shaagagga baabuurta ay gubanayeen wadooyinka tan iyo arbacadii.
Cabsi laga qabo rabshado dilaaca marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa si weyn uga oogan dalka Kenya.
Kormeerayaasha caalamiga ah ee dushha kala socday doorashada Kenya ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay dulqaad muujiyaan oo ay isxakameeyaan.
Xoghayihii hore ee Arrimahada Dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hogaaminayay koox ka socotay Xarunta Karter ee Mareykanka oo ka mid aheyd kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada eegeysay, waxaa kaloo kormeeyaasha ka mid aheyd Ra’isul Wasaarihii hore ee Senegalese Aminata Toure.
Kerry ayaa ku booriyay Kenyanka inay dibaadka raacaan, hadiiba ay dhacdo inay ka horyimaadaan natiijada doorashada.
Kormeerayaasha doorashada sida Carter Center, iyo Hey’adda National Democratic Institute oo labaduba fadhigoodu yahay mareykanka, Midowga Africa, iyo midowga Yurub ayaa dhamaantooda sheegay in doorashadii dhacday Talaadadii ay aheyd mid si daah furan ku qabsoontay.
Madaxweyne Maxamed C/llahi Farmaajo oo amray howgal si aad loo qorsheyay oo lagu dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab
Arda Turan says ready to return to Turkish national football team